IWolder ikushiya ngaphandle kwezizathu, sizamile iiglasi zeVR kwaye zilinganisela | Iindaba zeGajethi
Ngaphezulu kwesihlandlo esinye sithethile nawe malunga ne-Wolder yaseSpain, kunye nezixhobo zayo ezaziwa kakhulu, nokuba ziipilisi, njengenkampani yokuqala kazwelonke kwimarike, okanye uluhlu lwayo olutsha lwezixhobo ijonge ukubeka ukusebenza kunye netekhnoloji eNtsha efumanekayo kuye wonke umntu. Ukuba unyaka we-2016 wayemi ngaphandle kwento, kungenxa yokuba yayingunyaka woBunyani boBunyani, kwaye iWolder iyithanda kakhulu imeko yedemokhrasi yazo zonke iintlobo zomxholo onxulunyaniswe nezinto zabathengi zombane, ke le nto ayinakuba mbalwa. Kudala kuvavanywa iiglasi zeWolder VR, iiglasi zokwenyani zenyani ngexabiso elifanelekileyo kwaye oko akuyi kukushiya ungakhathali.
Sijongene neiglasi eziyinyani eziyinyani ezenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, ubuncinci ukuba sithathela ingqalelo izixhobo ezikhuphisanayo, uninzi lwazo zenziwe ngeplastikhi ezinobunzima okanye zekhadibhodi. Ngesi sizathu, iWolder iye yafuna ukwahlula ngokwayo ngokuphumeza i-polycarbonate ecwebezelayo ngaphandle kwezi glasi ziyinyani, umbala omhlophe njengokumangalisa njengoko kulula. Ke, ngaphandle kwexabiso, akufuneki sikhathazeke ngokuqina kwayo okanye ukuhamba kwexesha.
I-Wolder ifake ezi glasi ziyinyani ngaphakathi koluhlu lwe-VISION, uthotho lweemveliso ezijolise kumfanekiso, phakathi kwazo sifumana iikhamera zemidlalo ezingama-360º ezenza kakuhle. Ezi glasi zinokuthathelwa ingqalelo njengokhuphiswano oluthe ngqo lwazo zonke iiglasi eziyinyani zefomathiIya kuba sisixhobo esiphathwayo esiya kwenza yonke imisebenzi yokulungisa, iiglasi zeVR ziya kukhathalela kuphela ukuba siziva sikhululekile kwaye singonwabela umxholo kwiNyani eyiyo ngendlela elula. Ke makhe sibaqwalasele nzulu ngakumbi.
1 Umgangatho kwizinto kunye nentuthuzelo
2 Ukusetyenziswa kunye nokusebenza
3 Uluvo lomhleli, ixabiso kunye neengcebiso
Umgangatho kwizinto kunye nentuthuzelo
Kwaye sibuyela kwezi sele zikhankanyiwe, zezi ziglasi yenziwe nge-polycarbonate emhlophe kwaye inike imvakalelo esemgangathweni ngephanyazo, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo ixabiso layo. Ziyamelana kwaye zizinzile ukuzisebenzisa. Kananjalo banesikhumba sokulinganisa esigutyungelweyo esigquma kwiindawo ezinobuchule, Ukusinika uzinzo kunye nentuthuzelo ngexesha lokusetyenziswa, kwaye inyani yokuba bahamba kancinci kangangoko kwaye bahlukanisiwe ngaphandle kubalulekile ekuboniseni ukonwaba okusemgangathweni, kwaye ngenxa yoku, uWolder ubeke umgudu omkhulu.
Yonke into ibonisa ukuba siza kuziva sikhululekile, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo amagwegwe ayo kunye neteyiphu yokuqinisa, eya kusivumela ukuba sikonwabele ukuhamba ngaphandle kweyona nkxalabo.
Ukusetyenziswa kunye nokusebenza
Njengoko besesitshilo, umsebenzi uyakwenziwa sisixhobo esiphathwayo, sinenkxaso ngomnyango (isitshixo sokulungisa isixhobo) kunye nesikhuselo esiza kufaka kuso nasiphi na isixhobo esiphathwayo phakathi kweesentimitha ezine kunye nee-intshi ezintandathu nesihlanu, ngaphezulu kunokwanele uninzi lwezixhobo zefowuni ezikhoyo kwimarike. Yilapho umgangatho wesikrini usebenza khona, Ukuba sifuna ukonwabela iNyaniso elungileyo, kufuneka okungenani siqinisekise isisombululo se-HD epheleleyo ye-HD. Ukongeza, banenkqubo eya kusivumela ukuba silinganise ngokulula indawo yeelensi, sisebenzisa amavili alula, sinokuhlengahlengisa yonke into ngokuchaneka.
Sikwazile ukuyivavanya ngazo zonke iintlobo zomxholo, ukusuka kwii-roller coaster iihambo ukuya kwimidlalo yokunxibelelana, isicelo seYouTube ngokwaso sinokukhetha okuhle komxholo weReality Virtual oya kukwenza wonwabe ziiglasi zakho zeWolder VR.
Uluvo lomhleli, ixabiso kunye neengcebiso
Ukuba ujonga iiglasi zokwenyani zenyani, kuya kuba nzima kum ukucebisa ezinye iiglasi ezazingezizo emva kokuzisebenzisa. Yi- € 29,99 kuphela eyahlulahlula ekuzifumaneni, ukubanakho ukuzithenga LAPHA kwiAmazon, okanye ngokuya ngqo kwicandelo LOMBONO wewebhusayithi yomenzi. Kwibhokisi uza kufumana iiglasi eziyinyani kunye nemitya eya kuthi ibambe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IWolder ikushiya ngaphandle kwezizathu, sazama iiglasi zakhe zeVR kwaye zilinganisa